सेक्सको लागि अयोग्य भएछु, २५ वर्ष नपुग्दै श्रीमानको मायाबाट टाढा हुनुपर्दा अपूर्व पीडा हुन्छ, म के गरौं ? « Pana Khabar
सेक्सको लागि अयोग्य भएछु, २५ वर्ष नपुग्दै श्रीमानको मायाबाट टाढा हुनुपर्दा अपूर्व पीडा हुन्छ, म के गरौं ?
प्रकाशित मिति : Nov 27, 2017
समय : 2:07 pm
मनोविद् तथा यौनविज्ञ करुणा कुँवरसँग जिज्ञासा र सुझाव
मनोविद् तथा यौनविज्ञ करुणा कुँवर
त्यो दिनदेखि उहाँले मलाई केही पनि गर्नुभएन र विस्तारै विस्तारै पर हुँदै जानुभयो । तर, जब-जब उहाँलाई देख्थेँ, मलाई बान्ता आउला जस्तो हुन्थ्यो । त्यसपछि मैले कुनै पनि पुरुषसँग प्रेम गर्न सकिनँ । त्यो घटनाको ७ वर्षपछि मेरो विवाह भयो । यो बीचमा केही युवाले प्रेम प्रस्ताव राखे पनि मैले उनीहरुलाई उल्टै गाली गरेँ । विवाहपछि एकै पटक हनिमुन मनाउँदा म यौन सम्पर्कका लागि अयोग्यजस्तै भैसकेँछु । आजभोलि मलाई मेरा श्रीमान् अन्त कतै जानुहुन्छ भन्ने महसुस हुन्छ । उहाँलाई केही भन्न सक्तिनँ कारण कमजोरी मेरै हो । तर, मन मान्दैन । २५ वर्ष नपुग्दै श्रीमानको मायाबाट टाढा हुनुपर्दा अपूर्व पीडा हुन्छ । म के गरौं ?
नमूना जी, तपाईको बारेमा भन्नुपर्दा तपाई र तपाईका श्रीमानवीच अझै सम्बन्ध जटिल नभई सकेको हुँदा माथि उल्लेखित उपायहरु पछ्याउनुहोला ।
प्रकाशित मिति ११ मङ्सिर २०७४ सोमबार
दुर्लभ ‘ब्लड ग्रुप’, ५६ वर्षयता विश्वभर जम्मा ४३ जनामात्रै भेट्टिए !
गम्भीर रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ ”शरीर चिलाउने समस्या” – डा.नारायणसिंह गुरुङ
यस्ता सेक्स सम्बन्धहरुलाई स्वस्थ मान्न सकिन्छ !
कुन समयमा महिलालाई यौन चाहना तिब्र हुन्छ ?
राम्रो सेक्स पर्फर्मेन्स सामान्यता १५ मिनेट हो तर तान्त्रिक सेक्स घण्टौँ घण्टासम्म हुन्छ किन ?
नेपालमा सेक्स टोयको बढ्दो व्यापार: विदेशीएका श्रीमान-श्रीमतीदेखि सेलिव्रेटीसम्मले प्रयोग गर्दै